Windows XP ရဲ့အမြန်နှုန်းကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းအချို့.... - keywords HERE
Home » window xp » Windows XP ရဲ့အမြန်နှုန်းကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းအချို့....
Windows XP ရဲ့အမြန်နှုန်းကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းအချို့....
ဒီဆားဗစ်က ကျနော်တို့ရဲ့စက်ထဲမှာရှိတဲ့ ဖိုလ်ဒါတွေ၊ ဖိုင်တွေရဲ့စာရင်းကို စနစ်တကျ စုစည်းပေးတဲ့ ဆားဗစ်တစ်ခုပါ။ ကျနော်တို့ ဖိုင်တစ်ဖိုင်ကို ရှာတဲ့အခါတိုင်း စက်ထဲမှာရှိသမျှ ဖိုင်တိုင်းကိုလိုက်စစ်စရာမလိုဘဲ တည်ဆောက်ပြီးသား index list မှာရှာခြင်းအားဖြင့် မြန်မြန်ရှာတွေ့စေပါတယ်။ ဆိုးတာက သူက system resourse တော်တော်များများကို သုံးတာပါပဲ။ ကျနော်တို့ ဖိုင်(သို့)ဖိုလ်ဒါတစ်ခုခုကို ပြင်ဆင်တိုင်း သူကအမြဲနောက်ကွယ်ကနေ indexing and updating လုပ်နေပါတယ်။ ကျနော်တို့က ဖိုင်တွေကို အမြဲရှာဖွေမနေရင်၊ မှတ်မိနေရင်(ဦးနှောက်ကောင်းရင်ပေါ့ဗျာ) ဒီဆားဗစ်မလိုပါဘူး။ ရံဖန်ရံခါ ရှာဖွေဖို့လိုအပ်ရင်တောင် ဒီဆားဗစ်ကို ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်။ သူ့ကိုအပြီး uninstall လုပ်ချင်ရင်....
၁. Start ကို သွားပါ။
၂. Setting ကိုရွေးပါ။
၃. Control Panel ကိုရွေးပါ။
(ဒါမှမဟုတ် Windows key + R နှိပ်ပြီး ပေါ်လာတဲ့ Run box ထဲမှာ control လို့ ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ရင်လည်းရပါတယ်)
၄. Add or Remove Programs ကို ဖွင့်ပါ။
၅. Add/Remove Windows Components ကို ရွေးပါ။
၆. Indexing Services check box က အမှန်ခြစ်ကို ရှင်းပစ်ပါ။ (အမယ်လေး... ဘာသာပြန်ရတာ မလွယ်ပါလား။ အင်္ဂလိပ်လိုရေးတာကမှ မျက်စိထဲမြင်လိမ့်ဦးမယ်ထင်တယ်။ )
၇. Next ကိုရွေးပါ။
Windows Xp ရဲ့ အမြင်ပိုင်းဟာ အရင်ဝင်းဒိုးစ်တွေထက်စာရင် စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပေမယ့် "ပေါ့စေလိုလို့ကြောင်ဆေးထိုး၊ ဆေးအတွက်ကြောင့်လေး"ဆိုသလို အဲဒီအခြယ်အသတွေကြောင့်ပဲ စက်ကိုနှေးကွေးစေပါတယ်။ ဂရပ်ဖစ်ပိုင်းကြောင့် စက်ကိုမနှေးကွေးစေဖို့...
Windows XP မှာ ကျနော်တို့ My Computer ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Windows Explorer ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုကို ဖွင့်လိုက်တိုင်း Windows က Network files and Printers တွေကို အလိုအလျောက် ရှာပါတယ်။ Explorer ဖွင့်လိုက်ရင် မှန်ဘီလူးပုံစံနဲ့ ဖိုင်ရှာနေတဲ့ပုံစံကို တစ်ခါတစ်လေ မြင်ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီ Search ကိုပိတ်ပြီး မြန်မြန် browse လုပ်နိုင်စေဖို့.....
ကျနော်တို့ ကွန်ပျူတာနဲ့အလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါ Application တွေအများကြီး တစ်ပြိုင်တည်းဖွင့်ပြီးသုံးလို့၊ ဒါမှမဟုတ် စက်ကိုသုံးတာကြာလာလို့ memory မလောက်မငဖြစ်လာတဲ့အခါ Windows ကနေ Hard disk ရဲ့ Partition တစ်ခုခုမှာ Pagefile လို့ခေါ်တဲ့ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေရာတစ်နေရာကို memory အစားထိုးအသုံးပြုပါတယ်။ (Pagefile ကို Virtual Memory လို့လဲခေါ်ပါတယ်။) Windows က သူလိုရင်လိုသလောက် pagefile အရွယ်အစားကို အလိုအလျောက်ရွေးချယ်သုံးသွားပါတယ်။ ကျနော်တို့က Pagefile အရွယ်အစားကို အသေသတ်မှတ်ပေးခြင်းအားဖြင့် Windows ရဲ့ ၀န်တစ်ခုကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ Pagefile အရွယ်အစားသတ်မှတ်ဖို့......
5. Highlight the drive containing your page file and make the initial Size of the file the same as the Maximum Size of the file. (pagefile ရဲ့ အစပမာဏနဲ့ အဆုံးပမာဏကို အတူတူထားပေးရပါမယ်။)
ဒီနေရာမှာ Pagefile ရဲ့ အရွယ်အစားကို ဘယ်လောက်ထားရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ Windows က Maximum အနေနဲ့ ကျနော်တို့စက်မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ memory size ရဲ့တစ်ဆခွဲ (1.5X)ကို ပုံသေထားပါတယ်။ ဥပမာ ကျနော်တို့စက်မှာ memory 512 MB ဆင်ထားရင် Windows က အမြင့်ဆုံး 768 MB ထားတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့်ဒါက 512 MB ထက်မင်မိုရီနည်းတဲ့ စက်တွေအတွက်ပဲလို့ ဆိုပါတယ်။ ဆိုရရင် ဒီစက်တွေအတွက် initial size = 768 Mb, maximum size = 768 Mb ထားပေးရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။ memory 512 Mb နဲ့အထက် စက်တွေမှာတော့ Pagefile အရွယ်အစားကို စက်မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ memory size အတိုင်း ရွေးချယ်ပေးရပါမယ်။ ဥပမာ.. memory 1 Gb ရှိတဲ့စက်မှာဆိုရင် initial size = 1024 Mb, maximum size = 1024 Mb ထားပေးရပါမယ်။ ပြီးရင် Set ဆိုတဲ့ ခလုတ်လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
(5) REMOVE FONTS FOR SPEED
ကျနော်တို့ကွန်ပျူတာတွေရဲ့ အဖိုးတန် system resourses တွေကို ယူသုံးနေတဲ့အရာတွေထဲမှာ ဖောင့်ဖိုင်တွေဟာလည်း တစ်ခုအပါအ၀င်ပါပဲ။ အကောင်းဆုံးက ကျနော်တို့လိုသလောက်၊ သုံးသလောက် မရှိမဖြစ်ဖောင့်အနည်းငယ်ကိုသာ သွင်းထားတာပါပဲ။ မလိုအပ်တဲ့ဖောင့်တွေကို uninstall လုပ်ဖို့......
Windows Xp စနစ်တွေဟာ လူပေါင်းစုံ၊ အလွှာပေါင်းစုံအတွက် ထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် အားလုံးအတွက်အဆင်ပြေစေဖို့ services မျိုးစုံကိုပြွတ်သိပ်ထည့်ပေးထားပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့မှာ ကျနော်တို့မလိုအပ်တဲ့ အလုပ်တွေအတွက် system ရဲ့resource တွေကို ဖြုန်းတီးနေသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ (ဥပမာ.. ကျနော့်အိမ်ကစက်မှာ ဘာအင်တာနက်၊ ဘာနက်ဝက်မှမရှိတဲ့အတွက် ကျနော့်အတွက်တော့ windows ရဲ့ Messenger တို့၊ Workstation တို့စတဲ့ ဆားဗစ်တွေဟာ အပိုပါပဲ။) အောက်ကစာရင်းမှာ စက်အားလုံးနီးပါးအတွက် မသုံးလည်းဘာမှမဖြစ်တဲ့ ဆားဗစ်တွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီ့ပြင်ဆားဗစ်တွေလည်း ရှိပါဦးမယ်။ သတိပေးလိုတာက ကိုယ့်စက်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့ ဆားဗစ်စာရင်းကို မိမိဘာသာ ဉာဏ်လေးနဲ့ယှဉ်ပြီး သတ်မှတ်ဖို့ပါ။
Human Interface Access Devices (do not disable if you use gamepad like stuffs)
Windows Start menu အောက်က Run ကို ဖွင့်ပါ။ (Windows + R) ပြီးရင် ပေါ်လာတဲ့ Run box ထဲမှာ services.msc လို့ရိုက်ပြီး Ok ကိုနှိပ်ပါ။ Services Management Console box ပေါ်လာပါမယ်။ အဲဒီထဲမှာ ကိုယ်ပိတ်ချင်တဲ့ဆားဗစ်ကို double click လုပ်ပြီး သူ့ရဲ့ startup type ကို Disable လို့ပြောင်းပေးရပါမယ်။ မပြောင်းခင် ဆားဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရှင်းလင်းချက်အတိုလေးတွေကို ဖတ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။ (တော်ကြာ ကိုပိုင်ရေ တွေ့ရာသင်္ချိုင်း ဓားမဆိုင်းပဲ ဆိုပြီးဖြစ်မှာစိုးလို့ပါဂျာ)
ကျနော်တို့ရဲ့ စက်ထဲမှာ folder တွေ၊ sub folders တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပါစို့။ ကျနော်တို့ folder တစ်ခုကို ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ Windows က ဒီဖိုလ်ဒါကိုဘယ်အချိန်မှာနောက်ဆုံးသုံးခဲ့သလဲဆိုတာကို ပြဖို့အတွက် အဲဒီဖိုလ်ဒါနဲ့ သူ့အောက်မှာရှိတဲ့ sub-folder အားလုံးကို စစ်ဆေးပါတယ်။ အဲဒါက အချိန်တော်တော်ကုန်စေပါတယ်။ (windows ကလည်းပိန်းပဗျာ။ အမေမှာ မှာတဲ့အတိုင်း အကုန်လုပ်တာပဲ။) ကျနော်တို့က ဘယ်ဖိုလ်ဒါကို ဘယ်အချိန်ဝင်ခဲ့သလဲ စိတ်မ၀င်စားဘူးဆိုရင် (ကျနော်သိသလောက် ဘယ်သူမှလည်း သတိထားပြီး ကြည့်မနေပါဘူး) အဲဒီ Feature ကိုအောက်ပါအတိုင်း ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ သတိ.. သတိ... registry ဆိုတဲ့ system databases ကိုဝင်ပြင်ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သတိကလေးချပ်ပြီး registry backup လေးဘာလေးလုပ်၊ ဒါမှမဟုတ် လက်ရှောင်နေလိုက်လို့လဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ချင်ရာလုပ်ပြီးရင် မေ့ပစ်တတ်တာ လူဆိုတဲ့အမျိုးမို့လို့ပါ။
Windows Start menu အောက်က Run ကို ဖွင့်ပါ။ (Windows + R) ပြီးရင် ပေါ်လာတဲ့ Run box ထဲမှာ regedit လို့ရိုက်ပြီး Ok ကိုနှိပ်ပါ။ Registry Editor Window ပေါ်လာပါမယ်။ ဘယ်ဘက်က pre-defined Keys listထဲမှာ "HKEY_LOCAL_MACHINE\_System\_CurrentControlSet\_Control\_ FileSystem" ထိရောက်အောင် အဆင့်ဆင့်သွားပါမယ်။ ပြီးရင် ညာဘယ်က နေရာလွတ်တစ်ခုခုမှာ right click လုပ်၊ ပေါ်လာတဲ့ pop-up menu ထဲက New -> DWORD Value ကို click လုပ်ပါ။ New Value #1 ဆိုတဲ့ Key အသစ်ကို 'NtfsDisableLastAccessUpdate' လို့ အမည်ပြောင်းပါ။ သူ့ရဲ့ Value Data က ပုံသေ (0) ဖြစ်နေပါမယ်။ အဲဒါကိုပြောင်းဖို့ ကျနော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ key အသစ်ကို double click လုပ်၊ ပေါ်လာတဲ့ Edit DWORD Value box က Value Data မှာ 1 လို့ပြောင်းပြီး Ok ပြောပါ။ ပြီးရင် registry editor ကိုပိတ်ပြီး ကွန်ပျူတာကို restart or log off လုပ်ပေးရပါမယ်။
Windows Xp မှာ Boot Optimize Function လို့ခေါ်တဲ့ Feature အသစ်တစ်ခု ပါလာပါတယ်။ သူက ၀င်းဒိုးစ်စနစ်စတင်ချိန်မှာ လိုအပ်တဲ့ boot ဖိုင်တွေကို အစီအရီထားပေးခြင်းဖြင့် စက်စတင်ချိန်ကို မြန်စေပါတယ်။ ဒီ Function က စနစ်တော်တော်များများမှာ ပုံသေဖွင့်ပေးထားပေမယ့် တစ်ချို့စက်တွေမှာ ပိတ်နေတတ်ပါတယ်။ သူ့ကိုပြန်ဖွင့်ဖို့....
Right-click on it and select "Modify"
တကယ်လို့ ကျနော်တို့ရဲ့ ကွန်ပျူတာစနစ်မှာ 256 Mb ထက်ပိုများတဲ့ memory ရှိတယ်ဆိုရင် အောက်ပါအတိုင်းပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြင့် စက်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုတက်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ၀င်းဒိုးစ်စနစ်တွေမှာ စက်ရဲ့ physical memory နည်းလာပြီဆိုရင် swap file (or) pagefile ကို အစားထိုးသုံးပါတယ်။ အဲဒီ virtual memory က physical memory ထက်စာရင် တော်တော်နှေးပါတယ်။ ဒီ Tweak လေးက ကျနော်တို့စက်မှာရှိသမျှ memory နောက်ဆုံး 1 Mb ကျန်သည်အထိ စက်ကိုအသုံးပြုစေပါတယ်။ ပြီးမှ swap file ကိုသုံးစေပါတယ်။ အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ပေးရပါမယ်။
အောက်မှာပေးထားတဲ့ Cacheman ဆိုတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်လေးက ကျနော်တို့စက်မှာရှိတဲ့ disk cache, memory နဲ့ အခြားအသုံးဝင်မယ့်အရာတွေကို အကောင်းဆုံးအနေအထားမှာရှိနေအောင် ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မြန်နှုန်းကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ မြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလွယ်ဆုံးက အောက်က Tool ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး setting တွေချိန်ပေးပါ။
-General Settings tab ကို ဖွင့်ပြိး ကိုယ်အသုံးပြုနေတဲ့ အင်တာနက်မြန်နှုန်းကို ရွေးချယ်ပေးပါ။
-Network Adapter tab ကိုဖွင့်ပြီး ကိုယ်အင်တာနက်ကို ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ထားသလဲဆိုတာ ရွေးချယ်ပေးပါ။
-အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်းကို ချိန်ညှိဖို့ Optimal Settings ကို ရွေးပြီး Apply button ကို နှိပ်ပေးပါ။
-စနစ်ကို restart လုပ်ပါ။
1. Run Bootvis
Windows စနစ်တွေရဲ့ Performance ကို မြန်စေတဲ့အရာတွေထဲမှာ pagefile လို့ခေါ်တဲ့ virtual memory ကို အမြဲတမ်း defragmented ဖြစ်စေတာလည်း တစ်ခုအပါအ၀င်ပါပဲ။ ဒီလိုဖြစ်နေအောင် နည်းလမ်းတော်တော်များများရှိပါတယ်။ တစ်ခုက ကျနော်တို့ရဲ့စက်မှာ partition တစ်ခုသပ်သပ်ဖန်တီးပြီး pagefile တစ်ခုတည်းသုံးဖို့ သတ်မှတ်ပေးတာပါ။ နောက်တစ်ခုက အမြဲတမ်း pagefile defragmented ဖြစ်နေစေဖို့ PageDefrag ဆိုတဲ့ Tool လေးကို run ပေးတာပါ။ ကျနော်တို့စက်စတင်ချိန်တိုင်းမှာ pagefile ကို defrag လုပ်အောင် ချိန်ညှိထားလို့လည်းရပါတယ်။